Farriin qarsoodi ah oo ku saabsan xiritaanka Megaupload | Laga soo bilaabo Linux
Farriin qarsoodi ah oo ku saabsan xiritaanka Megaupload
Sida ay noosheegtay asxaabteena Tina Toledo warkaan Megaupload waa la xiray.
Natiijada ka soo baxday Anonymous ayaa u soo dirtay jawaab tan, macluumaadka waxaa na siiyay nerjamartin gudaha Forum:
Muwaadiniinta Mareykanka, Waxaan nahay Anonymous.
Taasi waa feejignaan deg deg ah oo deg deg ah oo ku socota dhammaan dadka Mareykanka. Nasiib darrose, maalintii aan wada sugaynay ayaa timid. Mareykanku wuxuu faafreebayaa internetka. Jawaabteena muuqata waxay tahay ma fadhiisaneyno inta xuquuqdeena ay qaadaneyso dowlada aan ku kalsoonahay inay ilaashato. Tani maaha qaylo-dhaan, laakiin waa baaq ictiraaf iyo waxqabad leh!
Dawladda Mareykanku waxay hanatay habkan musuqmaasuqa ah ee na siinaya dareen been ah oo xorriyad ah. Waxaan u maleyneynaa inaan xor nahay oo aan sameyn karno waxa aan dooneyno, laakiin dhab ahaantii aad ayaan u xaddidan nahay oo waxaan ku xadidanahay waxa aan sameyn karno, sida aan u fikiri karno, iyo xitaa sida aan ku helno waxbarashadeena. Waxaa si aad ah noogu mashquushay jahawareerkan xorriyadda oo waxaan noqonay wixii aan isku dayeynay inaan ka baxno.
Muddo aad u dheer waxaan iska taagneyn bilaa camal halka walaalaheena la qabtay. Inta lagu jiro waqtigan, dowladdu waxay ku mashquulsan tahay khiyaanooyin, iyadoo qorsheyneysa farsamooyin lagu kordhinayo faafreebka iyadoo laga xannibayo bixiyeyaasha adeegga internetka, baloogyada DNS, faafreebka mashiinka raadinta internetka, faafreebka bogga, iyo habab kala duwan oo loo isticmaalo.Waxay si toos ah uga soo horjeedaan qiimaha fikradaha Anonymous iyo aabayaashii aasaasay waddankan, kuwaas oo aaminsanaa xorriyadda saxaafadda iyo hadalka.
Mareykanka badanaa waxaa loo isticmaalay tusaale ahaan waddanka xorta ah ee ku habboon. Markii ummad lagu yaqaanno xorriyadeeda iyo xuquuqdeeda ay bilaabaan inay ku xad gudbaan dadkooda, waa marka ay tahay inaad la dagaallanto, maxaa yeelay mar dhow ayaa kuwa kale iman doonaan. Ha u maleynin in sababta oo ah inaadan aheyn muwaadin Mareykan ah, taasi adiga kuma khuseyso. Ma sugi kartid inta wadankaagu go'aansado inuu sidaas oo kale sameeyo. Waa inaad joojisaa kahor intaysan weyneyn, kahor intuusan noqonin wax la aqbali karo. Waa inaad baabi'isaa aasaaskeeda intaysan awood badan yeelan.
Dowlada Mareykanku miyaanay wax ka baran wixii hore? Miyaadan arag kacdoonkii 2011? Miyaadan arkin inaan ka soo horjeedno tan meel kasta oo aan ka helno oo aan sii wadi doonno diidmada? Sida iska cad dowladda Mareykanka waxay aaminsan tahay in laga dhaafay. Kani ma aha oo keliya wicitaan ka yimaadda kooxda Anonymous si wax looga qabto. Muxuu sameyn karaa weerarka loo qaybiyey ee Diidmada Adeeggu? Waa maxay degel la jabsaday oo ka dhan ah awoodaha musuqmaasuq ee gobolka? Maya. Tani waa baaq loogu talagalay mudaaharaad toos ah oo caalami ah iyo mid jireed oo looga soo horjeedo awoodda na xukunta. Fariintaan meel walba ku faafi. Ma istaagi doonno! U sheeg waalidiintaada, deriskaaga, dadka kula shaqeeya, macallimiinta iskuulkaaga, iyo qof kasta oo aad xiriir la leedahay. Tani waxay saameyneysaa qof kasta oo doonaya xorriyadda inuu si qarsoodi ah u duulo, u hadlo si xor ah cabsi la'aan ciqaab, ama mudaharaad aan baqdin laga qabin.
U gal shabakad kasta oo IRC ah, Shabakad kasta oo Bulsheed, beel kasta oo khadka tooska ah ku dhex jirta, oo u sheeg gaboodfallada la doonayo in la sameeyo. Haddii mudaaharaadku uusan ku filnayn, dawladda Mareykanku waxay arki doontaa inaan dhab ahaan nahay guuto isla markaana aan u midoobi doonno xoog xoog leh oo ka soo horjeedda isku daygan ah in aan mar kale faafreeb ku sameyno internetka, iyo inta lagu guda jiro howsha lagu dhiirrigeliyo dowladdaha kale inay sii wadaan sidaas ama ay sameeyaan. sidaas. isku day.
Waxaan nahay Anonymous.
Waxaan nahay legion.
Uma oggolaanno faaf-reebka.
Ma iloobeyno diidmada xorriyadeena shaqsiyadeed, xuquuqdeena aadanaha.
Dowladda Mareykanka, waxay ahayd inaad na sugto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Farriin qarsoodi ah oo ku saabsan xiritaanka Megaupload
kuwani waa KHASASAD !!!!!!!!! Waa nasiib daro in aan laga taageeri karin CUBA, waan arki doonaa waxa dhaca socodka maanta ... waxaa jira imisa shabakado ayaa ku dhacaya heh .... waxaana ku sagootinayaa weedhan
+ »Marka sharcigu cadaalad daro yahay, waxa saxda ah ee la sameeyo waa in la caasiyo» M. Gandhi
Hal shay ayaa ah caasinimo shicib iyo mid kale oo ah in laga mudaharaado iyadoo la galayo dambiyo.
Aniga ahaan arinta xidhitaanka megaupload Waan ka walwalsanahay sababta oo ah xuquuqda dhinacyada saddexaad ayaa la saameeyay -dadka si daacad ah ugu bixiyay adeeg qiimo leh ama kuwa martigaliyay waxyaabaha ay iyagu leeyihiin- laakiin runtu waxay tahay inaanan gacmahayga dab ku shubin milkiilayaashooda ... isla markaana waxaan ka idhaahdaa meelaha sida Taringa.
Nasiib wanaagse waxaa jira dad ka walaacsan la-dagaallanka xadgudubyada ka imanaya is-afgarad la'aanta cybernetic ee sameynta. Saamiyadu way badan yihiin, wax shaqo ahna kuma lahan burcad-badeednimada.
Hagaag, fiiri in wax la qaban karo, warka ku faafi meel kasta, faallooyin qofkasta oo kara si ay iyaguna ula qabsadaan kuwa kale, ha joojin faafinta farriinta, isticmaal ishtags-ka twitter-ka haddii ay suurogal tahay mawduuca meesha ugu sareysa.
Mudanayaal, waxaa la joogaa xilligii wax laga qaban lahaa.
Shakhsi ahaan, xiritaanka Megaupload wuxuu umuuqdaa mid aad uxun, ganacsi loo maleynayo inuu sharci yahay, halkaasoo aad lacag kagabixineyso adeeg.
Laakiin sida had iyo jeer danta dad yar laga hormariyo kuwa intiisa kale. $ $ $
Isku mid ahaanshaha goobta ayaa xirmay ka dib markii ugu horeysay ee mugdiga weyn? Ma aaminsani. Sida aan ku arko, waxay rabaan inay tan ku cabsi geliyaan dadka isticmaala internetka. Iyagoo marmarsiiyo ka dhiganaya la dagaalanka budhcad badeeda waxay isku dayaan inay inaga aamusiyaan dhamaanteen. Megaupload waxay sameysay wax walba oo ay kari karto si ay uga saarto qalabkan sharci darada ah ...
Laakiin dabcan! Way ka muhiimsan tahay in la daryeelo danaha shirkadaha waaweyn ee runti ina khiyaaneeya macaamiishooda, halkii aan runtii ka raadin lahayn tuugada, kuwa kufsada, kuwa daroogada ka ganacsada ... Ama ka qaadan kuwa dakhliga badan ee doqonimada badan uga yimaada siyaasiyiinta, iyada oo aan lagu xusin taabashada jilayaasha iyo telefishanadooda…
Xitaa ma aqaano waxa laga fikiro, ugu dambeyntii, annaga, dadka, waxaan siineynaa dhammaantood damac.
magaaladuna habaar ha siinin dhammaantood
Runtii badanaa waa sidan
Kuwa Anonymous ayaa daabacay xogta shaqsiga ah ee agaasimaha FBI http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2012/01/20/anonymous-revela-datos-personales-del-director-del-fbi-robert-muller/
Kahor intaysan sidan dhicin, waxaan daabacay dhowr qoraal. Maaddaama ay u muuqdeen kuwo qaylo-dhaan ah iyo shirqool, ma helin echo.
Mid ka mid ah shirqoollada ugu badan wuxuu ahaa midka aan cinwaan uga dhigay, "Sharciga SOPA, taliyihii ayaa yimid oo amar ku bixiyay in la joojiyo ..."
Hadda miyay digtoonaadeen? ...
Waxa dhacaya waa wax aad u weyn waana inaan feejignaano oo aynaan u oggolaan nafteenna in ay ka adkaato xakamaynta xad-dhaafka ah ee dawladaha ay dhiirrigeliyaan kuwa wax ku qaybiya waxyaabaha waaweyn.
Hoggaamiyeyaasha Mareykanku waxay aaminsan yihiin inay awood iyo xorriyad u leeyihiin inay u dhaqmaan sidii booliska adduunka. Waxay ku faanaan inay yihiin kuwa ugu furfuran uguna dimuqraadiyadda badan meeraha, marka run ahaantii ay tahay umadda abuurtay khilaafaadka ugu badan taariikhda oo dhan. Colaadaha marwalba abuura dano shaqsiyeed, ayagoo u jiidaya ummadaha kale iyaga laftooda inay ku kacaan xumaantooda magaca xorriyadda iyo sinnaanta. Yurub waa inay kahortagtaa Mareykanka iyo xumaantiisa, sikastaba munaasabado badan ayaay ku taageeraan oo dhanka kale ka fiiriyaan. Mareykanka waxaa loo abuuray kharash ah inuu u geysto waxyeelo iyo xanuun weyn milkiilayaashiisa xaqa u leh, dilida deganayaashiisa iyo xatooyada dhulkooda. Hadda qarniga 21-aad waxay rabaan inay sii wadaan xumaantooda, kiiskanna, iyagoo xakameynaya internetka oo dhan. Xakamayntaani waxay ka fogtahay ilaalinta danaha xuquuqda lahaanshaha, dantaan ayaa ah inaan xakameyno talaabo kasta oo aan qaadno anaga oo ilaalinayna asturnaansheena gaarka ah sida ka dhacda wadamada ay xukumaan daalimiinta. Mareykanku waa tusaalaha ugu weyn ee xukunkaas oo loo soo qaatay xorriyado. Horay ayey u fiicantahay in xoog lagu aqbalo siyaasadaha cabudhinta ee qarankan, xorriyadaydu waa tayda, waxaanan go aansadaa cida aan rabo inaan la wadaago, internetka ayaa ah oo waligiisna ahaa barxad xor ah, oo aan lahayn milkiileyaal, faafreeb la'aan, kelitalis la'aan . Haddii aan iska aamusno waxba ma gaari doonno, codkaaga kor u qaad, waad xor tahay, waxaad awood u leedahay inaad maya ku tiraahdid kuwaan daalimiinta ah, haddii aad aamusto, mustaqbalka internetka iyo xuquuqdaada ayaa lagu tumanayaa noloshaada oo dhan.
Megaupload wuu xirmay